En vente actuellement 04/12/2018
Ireo fahagagana 6 ataon’ny ravintsara
Ahitana voka-tsoa maro be ny ravintsara. Manana fahafahana miady amin’ny mikraoba izy ity ka manasitrana ny fery. Miady amin’ny homamiadana sy ny diabeta ihany koa izy ary tena tsara ho an’ny taovam-pandevonan-kanina.
Ireo sitra-po sy fangatahan’i Beyoncé … tsy maintsy tanterahina
Samy manana ny zavatra takiany ireo mpihira mialohan’ny hiakarany an-tsehatra. Mandritra ireo fitetezam-paritra notanterahiny dia be ihany ireo fangatahana hafakely sy fitsipika apetrany amin’ireo ekipany. Ireto tanisainay aminao ireto izao ny sitra-pon’i Beyoncé tsy maintsy tanterahina…
Manamboatra hazonoely miaraka amin’ny ankizy
Tena mahafinaritra ny miara-manao asa-tanana amin’ireo ankizy. Amin’izao ankatoky ny krismasy izao dia karazana hazonoely vita avy amin’izay akora hita ao an-trano no entina aminao anio.
Manahy ny amin’ny mety ho fiarahan’ny samy pretra sasany ny papa François
Nilaza ny papa François fa miahiahy mikasika ireo pretra sy mpino lehilahy, mitia lehilahy. Matahotra mantsy izy sao ho lasa miitatra izany fironana izany ka hanjary ho lamaody any amin’ny fiangonana katolika.
Ahitra artifisialy, misoroka fahasarotan’ny fitondrana vohoka
Manam-pahaizana avy ao amin’ny oniversiten’i Cambridge no namorona ahitra artifisialy. Ny 28 novambra teo izany no navoakany tamin’ny fomba ofisialy.
Vehivavy miisa 125 no voaolana sy niharan’ny herisetra tany Soudan
Araka ny tatitry ny « Médecins Sans Frontières » (MSF) dia vehivavy sy ankizy vavy miisa 125 no voaolana sy niharan’ny herisetra noho ny ady an-trano tany Atsimon’i Soudan nandritra ny 10 andro monja, tamin’iny volana novambra lasa iny.
Alarobia : voanjobory sy henankisoa – 9.000Ar
Akora ilaina · Voanjobory maina 2kp- 2.000Ar · Henan-kisoa ½ kg – 6.000Ar
"Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge". Coco Chanel
Voninkazo, ravaky ny tokantrano no isokajiana antsika vehivavy matetika. Marina tokoa izany satria nomena endrika, firafitra sy toetra voajanahary kanto isika. Mila koloina avokoa anefa ireo tombony hananantsika ireo mba haharitra ara-potoana ilay hatsarana.
Rehefa faran’ny herinandro tahaka izao dia betsaka ireo tia mivoaka kely sy mitondra ny kilonga hiala sasatra. Ho an’ireo mitady toerana azo handehanana amin’izany, dia ireto no azo haleha.